अब महिलाले अर्को विहे गरेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने - Nepal Insider
Home/समाचार/अब महिलाले अर्को विहे गरेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने
778 Less thanaminute
काठमाडौं । ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५’ लाई पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकले सो विधेयकलाई पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको बैठकले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो ।
आयो नेपाल आईडलका सुमित पाठकको समाचार, छ कि छैन दमदार ? (भिडियो सहित)
नौ जनाको हत्या हुँदा भागेर बाँचेकी सीता प्रदेश सरकारको जिम्मा
महानायक राजेश हमाल दम्पतिले आखिर ! सन्तान किन जन्माएनन् ?
कतारमा ब%ङालीले नेपाली माथि आ%क्र%मण
एसईईको नतिजा केही बेरमा प्रकाशित यसरी हेर्नुहोस् नतिजा [तरिकासहित]